ZayYarHlaing: In My Dream
အိမ်မက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်နိုးလာတော့ ... နွားနို့ တစ်ခွက်သောက်မယ်စိတ်ကူးပြီး၊
မီးဖိုချောင်ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါ လက်တွေက coffee ခါးခါးတစ်ခွက်ကိုဖျော်လို့...။
ဒါနဲ့ ပဲ coffee ခွက်ကလေးကိုကိုင်ကာ ဗဟုတုတ၇ှာမယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုစိတ်ကူးပြီး
Laptop ကိုကိုင်လိုက်တော့၊ လက်ချောင်းလေးတွေက pc game ၁ ခုကိုစတင် play နေပြီ။
Game Over လဲဖြစ်သွားေ၇ာ၊ တော်ပြီမြို့ ထဲသွားမယ်ပေါ့။
Bus stop ကိုသွားပြီးလိုင်းကားလေးတိုးစီးလိုက်မယ်စိတ်ကူးတော့၊
အမယ် ... လက်တွေက Taxi ကိုတား၊ ပါးစပ်ကဈေးတောင်မှစစ်နေပြီဗျ။
စီးဘူးကွာ၊ စီးဘူးလို့ ငြင်းဆန်မယ်ကြံခါ၇ှိသေး၊ ဇေယျာလှိုင်တစ်ယောက်
Taxi ပေါ်မှာမိန့် မိန့် ကြီးထိုင်တောင်နေပြီခင်ဗျ။
ဒီလိုနဲ့ မြို့ ထဲေ၇ာက်သွားေ၇ာဆိုပါတော့။
မြို့ ထဲက ဂျာနယ်ေ၇ာင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုကိုဝင်ပြီး Internet ဂျာနယ်ဝယ်အုံးမှလို့ 
တွေးမိတော့၊ ဟဲဟဲ ထွန်းထွန်းလွင်လိုပဲ ဘောလုံးဂျာနယ်ကိုလက်ကကိုင်ပြီးနေပြီဗျ။
ညစ်လာပြီကွာ၊ အိမ်ပြန်တာပဲကောင်ပါတယ်လို့ စိတ်ကူးမိပြန်တော့၊
ဇော်မင်းတို့ ၊ မျိုးဝင်းတို့ လိုပဲခြေထောက်တွေက Beer Shop ကိုဦးတည်လို့ သွားနေပြီ။
ဟား .....ေ၇ာဂါပဲဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်လဲပြန်ေ၇ာက်ေ၇ာ၊ မူးတာကမူးတာပဲ ဘု၇ားလေးတော့၇ှိခိုးအုံးမယ်
ဆိုပြီးစီတ်ထဲတွေးတုံး၇ှိသေး ... ၊
( ဒါကတော့မောင်မောင်လွင်ဖြစ်နေကြ style )
( ထွန်းထွန်းလွင်၊ ဇော်မင်း၊ မျိုးဝင်း၊ မောင်မောင်လွင် တို့ ဆိုသည်မှာ၊ ကျွန်တော်၇ဲ့ 
အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။ ငါတို့ နာမည်တွေကြတော့ပါလဲပါဘူး။
အချစ်ပေါ့ပြီလားလို့ တော့မယူဆလိုက်ကြပါနဲ့ ။
ကျမ်းလေးသွားမှာစိုးလို့ ချန်ထားခဲ့၇ကြောင်းပါသယ်၇င်းတို့ေ၇ ... )
အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်အိပ်၇င်း၊ အိမ်မက်တွေထပ်မက်ပြန်ပါလေေ၇ာ ...။
လူတွေ၊လူတွေ ဟိုဟိုဒီဒီသွားလာနေကြတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပါပဲ။
အသက်ခပ်ကြီးကြီးလူကြီးတစ်ယောက်ကတော့ ထိုင်ခုံကြီးတစ်လုံးကိုမပြီးလမ်းတွေလျှောက်လို့ ။
ပြီးတော့အဲဒီခုံကြီးပေါ်မှာခန့် ခန့် ကြီးထိုင်လို့ ဗျ။
အမောလဲပြေသွားေ၇ာ ခုံကြီးကိုပြန်မ၊ လမ်းဆက်လျှောက်ပြန်ေ၇ာ။
ကျွန်တော်လဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့ ပြောမိတာပေါ့နော် ... ။
" ဘာလို့ ဒီခုံကြီးကိုမပြီး၊ လျှောက်သွားနေ၇တာတုံး။
နားခြင်၇င်တွေ့ တဲ့ခုံမှာပဲနားလိုက်ပြီးေ၇ာဗျာ။ ပင်းပန်းလိုက်တာ "
သူကပြုံးတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ...
" ငါ၇ခြင်တာက၊ ဒီခုံကပေးတဲ့သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှု၊ နောက်တွေ့ ၇မဲ့ခုံတွေက၊ ဒီခုံလောက်ငါ့၇ဲ့ ကျေနပ်မှုကို ပေးနိုင်မပေးနိုင်ဆိုတာမသေခြာဘူးလေ။
ဒီတော့ ငါ့အနေနဲ့ ၊ငါ၇ခြင်တဲ့ကျေနပ်မှုကိုသေခြာပေါက်၇နိုင်ဖို့ အတွက် ဒီခုံကိုအလေးခံပြီးငါသယ်တယ်။
ပင်ပန်း၇တာနဲ့ ငါပြန်၇တဲ့ကျေနပ်မှုဟာထိုက်တန်တယ်လို့ငါထင်နေသေးသမျှဒီလိုပဲငါသယ်သွားနေအုံးမှာပဲ " လို့ ပြန်ဖြေတယ်ခင်ဗျ။
ဒါနဲ့ ပဲကျွန်တော်လဲဟုတ်တော့လဲဟုတ်သားဟ လို့ တွေးပြီး
သူ့ အနားကထွက်လာတော့ ...
လူ၇ွယ်တစ်ယောက်၊ ခုနကလူကြီးလိုပဲ ထိုင်ခုံကြီးတစ်လုံးနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ
ကျွန်တော်လဲ သူကြတော့သူလိုခြင်တဲ့ကျေနပ်မှု၇ဖို့ ခုနလူကြီးလောက်
မပင်ပန်းပါလားလို့ တွေးပြီး၊ သူ့ ၇ဲ့Idea လေးကိုသဘောကြမိတာနဲ့ 
" ဟေ့ ... ခင်ဗျားကတော့မဆိုးဘူးဗျ၊ Idea လေးကလန်းတယ်။ နဲနဲပိုပြီးသက်သာသွားတာပေါ့ဗျာ " လို့ လှမ်းပြီးချီးကျုးလိုက်မိတယ်။
" ဒီလိုပါပဲကွာ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လိုခြင်တဲ့အ၇ာတစ်ခုကိုအမြဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားနေကြတာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုပ်၇ပ်အပေါ် ကိုယ်ကကျေနပ်နေဖို့ ပဲလိုတာပါကွာ" လို့ သူကပြန်ဖြေတယ်ခင်ဗျ။
သြော် ... ဟုတ်တာပဲ လို့ တွေးပြီး၊ ကျွန်တော်လမ်းဆက်လျှောက်ပြန်တယ်။
ဟာ ... ဟုတ်ပြီ။ ငါ့လိုငပျင်းမျိုးလဲ၇ှိသေးတယ်ဟ လို့ တွေးမိပြီး
" ဟေ့ ... သယ်၇င်း။ မင်းကတော့အလန်းဆုံးပဲ။ ဘာမှလဲမပါဘူး။
ပင်ပန်းမှုလဲမတွေ့ ၇ဘူး။ ဒီလိုနေတော့လဲပြီးတာပါပဲ။
သူတို့ အတွေးအခေါ်တွေကသာဂွမ်းနေကြတာ။ ဟား ... ဟား။ "
ဆိုပြီးစကားေ၇ာဖေါေ၇ာနဲ့ မိတ်သွားဖွဲ့ လိုက်တော့၊
မဟုတ်ဘူးကွ၊ ဒီမှာကြည့်ဆိုပြီး သူ့ ကျောပိုးအိပ်ထဲကနေအ၇ာတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီး၊
တဆင့်ခြင်းဖြေချလိုက်တော့ ... လှပသေသပ်တဲ့ခုံလေးတစ်လုံးဗျ။
" ဒီလိုကွ။ ငါသယ်လာတာတွေကများမှများပဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို ငါနဲ့ တစ်သားတဲဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားပြီး
မင်းအမြင်မှာငါကဘာမှလဲမပါဘူးလို့ ထင်နေတာပါကွာ " လို့ ၇ှင်းပြတယ်။
ဒါနဲ့ ပဲ လူကြီး၊ လူ၇ွယ်၊ လူငယ် ဒီ ၃ မျိုးထဲကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ 
ငါလိုခြင်တာကိုသယ်ဆောင်၇င်ကောင်းမလဲလို့ တွေး၇င်း အိမ်မက်ထဲမှာ
ပိုပိုပေါ့လာလာပြီးတစ်လှမ်းထက်တစ်လှမ်း ကျွန်တော်၇ဲ့ ခြေထောက်တွေဟာ
ဒီလိုနဲ့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကိုလှမ်းလိုက်တိုင်းမြေကြီးနဲ့ ဝေးဝေးလာလိုက်တာ
ဘွား ... ဆိုပြီးကျွန်တော်၇ဲ့ ရှေ့မှာတောင်ကြီးတစ်လုံးကိုမြင်လိုက်၇ပါလေေ၇ာ။
" အောင်မြင်မှုတောင် " တဲ့။
အမြင့်နဲ့ ဆိုနီးနီးလေးဗျ။ ဒါနဲ့ ပဲ လမ်းလဲကြုံနေတယ်။ တောင်ထိပ်ကလဲနီးနေပြီ။
ဒီတော့တောင်ထိပ်ကိုတော့တက်လိုက်အုံးမှပဲလို့ စဉ်းစာပြီး တက်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တော့
၇ဘူးဗျ။ နေ၇ာကတောင်နဲနဲမှမေ၇ွ့ ဘူး။ ဘာလဲဟ လို့ တွေးမိပြီး
" ဒီတောင်ကအောက်ခြေကနေစပြီးတက်မှ၇တာဗျ " တဲ့။
ပြီးတော့လမ်းဆက်လျှောက်၊ တွေ့ သမျှကောက်၊
ဒီလိုနဲ့ ပဲတစ်နေ၇ာေ၇ာက်တော့ တွေ့ ပြန်ပြီ " အခွင့်အေ၇းတောင် " တဲ့။
တိုတိုပဲပြော၇မယ်ဆို၇င်တော့ လမ်းတစ်လျှေက်လုံးတွေ့ ခဲ့တာပေါ့၊
တောင်တွေကအမျိုးမျိုး၊ မှားမှများပဲ။ ခက်တာကဘယ်တစ်ခုမှ တောင်ထိပ်ကိုေ၇ာက်ဖို့ 
အားလုံး အောက်ခြေကစတက်မှ၇မယ် ဆိုတာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတော့၊
ဒါနဲ့ ပဲ၊ မဖြစ်ခြေဘူး။အချိန်တော့မှီနိုင်ပါသေးတယ်လို့ တွေးပြီး
အဲ့ဒီမှာ ထူးဆန်းတာက ကျွန်တော်ကောက်ယူခဲ့တဲ့ဟာတွေကလဲ
သူတို့ ဟာသူတို့ မနေခဲ့ပဲ ကျွန်တော်နဲ့ အတူမြေကြီးပေါ်ကိုလိုက်ပါခုန်ချတော့တာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ဟာတစ်ဖြေးဖြေးပြုတ်ကျလာ၇င်း၊ ကြောက်လန့် စိတ်တွေမ၇ှိတော့ပဲ
ဆွဲငင်အားတွေဘာတွေတစ်စုံတစ်၇ာကိုသာဂ၇ုစိုက်စ၇ာမလိုဘူးဆို၇င်၊ ဘယ်လိုပြုတ်ကြမှုမျိုးကမှ၊ အထိမနာစေနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တစ်ခုကိုလဲ
မြေကြီးနဲ့ လဲခြေထောက်တွေထိသွားေ၇ာ ...
ဘာမှကိုမမြင်၇တော့ဘူးဗျ။ မှောင်လိုက်တာမှ ပိန်းလို့ ။နောင်တတော့မ၇ပါဘူး။
မျက်စိကိုမှိတ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာတင်ပလေခွေထိုင်လို့ တွေးခြင်၇ာတွေး
ဒါနဲ့ ပဲ ထိုင်နေတာထက်စာ၇င်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထသွားတာကမှပိုကောင်းအုံးမယ်လို့ တွေးပြီး
အလင်းေ၇ာင်လေးဘာလေးတွေ့ လိုတွေ့ ငြားမျော်လင့်ချက်သေးသေးလေးကို
သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။ ထိုင်နေတာကကြာပြီးဆိုတော့ ဒယီးဒယိုင်နဲ့ လေ၊
ပြီးတော့ပိန်းနေအောင်မှောင်နေတဲ့နေ၇ာမှာလျှောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဆိုတော့ကာ ...
မမြင်၇တဲ့အ၇ာတွေကိုတက်နင်း၊ ခြေထောက်တွေမှာသွေးတွေစို့ ၊
ပွန်းပဲ့စုတ်ပြတ်။ ဇာတ်ထဲမှာဆို၇င်တော့ ဒီနေ၇ာကမင်းသားလေးဇေယျာလှိုင်၇ဲ့ 
ဟဲဟဲ ... အဲဒီလိုဖြစ်မယ်ထင်တာပဲနော်။ဇာတ်ကနေတာဆို၇င်ပြောပါတယ် ... ။
၇င်မှာပိုက်ပြီး ဆက်လျှောက်၊ ဆက်လျှောက်ပေါ့ဗျာ။
အမှောင်တွေကြားကနေ မြူတွေလိုလို၊ မီးခိုးတွေလိုလို
လေးကိုခပ်ပါးပါးလေးစတွေ့ လိုက်၇တော့ ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတာပေါ့။
ဒါနဲ့ ပဲအဲ့ဒီအလင်းေ၇ာင်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားမြင်၇ဖို့ နီးသည်ထက်နီးအောင်
မြူခိုးတွေကြားထဲကနေ လှပတဲ့အလင်းေ၇ာင်နဲ့ အတူ
သူ့ ၇ဲ့ အပြုံးနဲ့ သူ့ ၇ဲ့ သိမ်မွေ့ အေးမြနေတဲ့ လှုပ်၇ှားဟန်တို့ ကြားမှာ
" ကို " တဲ့။
( ဘယ်သူ၇ှိ၇အုံးမှာလဲ၊ ကျွန်တော့်ချစ်သူပေါ့ဗျာ။
" ကို " ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတစ်ယောက်ပဲသုံးဘူးတာလေ။
ကြော်ငြာပါဗျို့ ၊ ကြော်ငြာ )
ဂီတ ... ချိုမြိန်လှပတဲ့ဂီတ၊ နားနှစ်ဘက်ကနေတစ်ဆင့်၇င်ထဲကို
တစ်ခွန်းထဲပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ တစ်သက်လုံးကြားယောင်နေမှာဖြစ်တဲ့ဂီတပါ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ကလဲသူ့ အနားကိုတိုး၊ သူကလဲကျွန်တော့်အနားကိုတိုး
အဲ့ဒီလို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညီမျှစွာတိုးလာကြပြီး၊ အတူယှဉ်တွဲကာ၇ပ်လို့ ၇တဲ့
ဓါတုဗေဒနည်းတွေနဲ့ ဖေါ်စပ်ထားတဲ့ ဘယ်လိုအမွှေးနံသာမျိုးမှကိုမပါတဲ့၇နံ၊
သူမ၇ဲ့ ကိုယ်သင်း၇နံမှာ ကိုကျွန်တော်တက်မက်စွာ၇ှု၇ှိက်နေတုံး
၁၅၀၀ အချစ်ကိုဖေါ်ပြတဲ့ ပန်းနုေ၇ာင်၇ယ်၊
၅၂၈ အချစ်ကိုဖေါ်ပြတဲ့ မိုးပြာေ၇ာင်လေး၇ယ်
အဲ့ဒီအေ၇ာင်လေး ၂ ခုကိုအချိုးညီစွာပေါင်းစပ်ထားတဲ့
" ပန်းသီးစားခြင်တာများကွာ၊ ပန်းသီးပင်စိုက်စ၇ာမလိုပါဘူး။
ဝယ်စားလိုက်လဲဖြစ်တာပဲ " တဲ့ ကျွန်တော့်၇ဲ့ တစ်ချို့ သောသယ်၇င်းများ၇ဲ့ စကားပါ။
ပန်းသီးပင်စိုက်ပြီးမှ၇မဲ့ပန်းသီး၊ ဝယ်စားလို့ ၇တဲ့ပန်သီး
ထိုထိုသောပန်းသီးတွေက အခုပန်းသီးလေးလောက်လှပါ့မလား ?
လိုခြင်တက်မက်ဖွယ်၇ှိပါ့မလား ? ကျေနပ်မှုေ၇ာအပြည့်အဝပေးနိုင်ပါ့မလား ?
ဆိုတဲ့ အတွေးများကိုတွေး၇င်းက သူမပေးတဲ့ပန်းသီးလေးကိုတစ်ကိုက်
စပြီးကိုက်စားကြည့်လိုက်တော့ ... ဘယ်ပန်းသီးနဲ့ မှကိုမတူ၊
( ကျွန်တော်ပန်းသီးပင်လဲမစိုက်ဘူးပါဘူး။ ပန်းသီးလဲဝယ်မစားဘူးပါဘူး။
ကျမ်းလေးနေမှာစိုးလို့ ချန်ထားခဲ့ပြီ။ ဟဲဟဲ )
သူမ၇ဲ့ နူးညံတဲ့လက်ကလေးတစ်စုံက၊ ကျွန်တော့်၇ဲ့ လက်မောင်းကို
သွားပြီ .... ။
သူ့ မ၇ဲ့ ခြေ၇င်းမှာဝပ်စင်းလို့ ပေါ့ဗျာ။
( ဇာတ်ထဲမှာဆို၇င်တော့၊ ဒီနေ၇ာဟာနှစ်ပါးသွားလေးပေါ့ဗျာ )
ပျော်၇ွှင်ကျေနပ်ခြင်းနဲ့ အတူ ... ။
"MAY I MARRY U "
ကွိစိ၊ ကွစိ၊ ကွိစိ၊ ကွစိ၊ ........................................................... ။
And so on ........................................................... Episode.
ဒီ post လေးကကျွန်တော့်ဘဝ၇ဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေပါဗျာ။
feeling လာသလိုလေးေ၇းလိုက်မိတာကို၊ ဒီနေ၇ာအထိပြီးဆုံးအောင်
ဖတ်ပေးခဲ့တဲ့ သယ်၇င်းများအားလုံးအတွက် ...
0 comments: to “ In My Dream ”